असुरक्षित राजधानी : काठमाडौँमा फेरि गोली चल्यो, तीन भारतीय ‘सुटर' पक्राउ !
ARCHIVE, INVESTIGATION, SPECIAL » असुरक्षित राजधानी : काठमाडौँमा फेरि गोली चल्यो, तीन भारतीय ‘सुटर' पक्राउ !
काठमाडौँ । काठमाडौँको कमलादीमा गोली चलेको छ ।कमलादी क्षेत्रमा बुधबार साँझ एक राउण्ड गोली चलेको हो । घटनास्थलबाट तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेको बताइएको छ । पक्राउ पर्नेमा जसवीर सिंह, अरविन्द्र सिंह र देवेन्द्र सिंह रहेका छन् ।
कमलादीस्थित हेरिटेज प्जालाबाट अटोमेटिक पेस्तोल र ५१ राउण्ड गोलीसहित उनीहरु पक्राउ परेको रविन्द्र धानुकले जानकारी दिए । प्रहरीले उनीहरु व्यवसायिक भारतीय सुटर रहेको र नेपालका कसैको हत्याको योजनासहित आएको आशंका गरेको छ।
उनीहरुको साथबाट ४ वटा म्यागजिन फेला परेको छ । कम्पनीहरुका कर्पोरेट कार्यालय रहेको प्जालामा एक राउण्ड गोली चलाए पनि कोही घाइते नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।